Hormonal Growth in Bangkok. Fampiasana hormonina mitombo ao Thailand
Androany aho te hiresaka momba ny zava-mahadomelina izay ho an'ny maro
amboaram-pefy. Ity fanafody mahagaga ity dia antsoina hoe - hormone mitombo.
Ny hormone fitomboana (hormone mitombo, STH, HGH, somatotropin, somatropin) dia
Ny hormonina peptide ao amin'ny volon'ilay volo fitaratra, izay ampiasaina
amin'ny fanatanjahantena ho an'ny fanabeazana ny fanampiana ny hozatra. Navoaka voalohany izy io
ao amin'ny 1956. Manana ny anaran'ny hormone mitombo na somatotropine (avy amin'ny teny latinina
kisendrasendra - vatana) satria eo amin'ny tanora dia miteraka fahasarotana
ny fitomboan'ny tsena, indrindra fa noho ny fitomboan'ny taolam-paty lava be
Ny hormone fitomboana dia navotsotra tao amin'ny hopitaly pitabatabana ho valin'ny
famantarana ny hypothalamus. Tokony ho roapolo taona teo ho eo, a
Ny olona dia mampihena ny famokarana ny hormonina amin'ny vatany. Ny fahanterana
Ny vatana dia mifandray amin'ny haavon'ny fihenan'ny hormone mitombo. dia
Ny taona 10 isan-taona dia mitombo ny hamaroan'ny hormonina mitombo amin'ny 15%.
Ny hormone mitombo dia tsy manana fahasamihafana ara-pananahana. Ny lanjany dia mitovy
ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Na dia eo aza ny fampiasana zava-mahadomelina misy
Ny hormone mitombo dia voararan'ny WADO (Fikambanana manohitra ny doka)
any Thailandy, azo alaina malalaka ireo fanafody ireo.
Mahasosotra ny tombontsoa azo avy amin'ny hormone - tsy dia misy loatra
fanatanjahan-tena ara-panatanjahantena, peptides, na ny anabolic steroids mihitsy aza. Azo inoana izany
Ny hormone mitrandraka dia manana fiantraikany tsara amin'ny fahatsiarovana
ny fahanterana ary mahatonga ny hoditra ho tanora kokoa.
Ny tombontsoa lehibe indrindra koa dia ny: fihenan'ny fatina tafahoatra, mitombo
ao amin'ny tanjaky ny hozatra, fampihenana ny isan'ny hatezerana sy fisorohana
kadona amin'ny ho avy, fitomboan'ny taolana amin'ny taolam-paty sy
fanamafisana ny hery fiarovana.
Eken'ny tsaho hoe Demi Moore malaza, Robbie Williams sy Madonna
nampiasa hormonal injections, ary i Stallone mihitsy aza no tonga nanohitra ny tsy ara-dalàna
fitaterana ny hormone fitomboana lehibe amin'ny sisin-tanin'i Aostralia,
nitondra tanteraka ara-dalàna an'i Thailand.
Ireo dokotera nahazo mari-pahaizana mampiasa tsindrona hormonina mitombo dia mino izany
ny loza ateraky ny mpankafy azy dia zavatra iray ihany - hihazakazaka anaty hosoka. toy izany
Ny fitsaboana dia mora, ary amin'ny fividianana hormonina amin'ny Internet, misy
Mety hiteraka voka-tsoa izay tsy takatry ny saina foana
Na dia misy fanehoan-kevitra hafa momba ireo mpikaroka izay manoro izany aza
Ny fanoloran-tena manadonto an'io zava-mahadomelina io dia manitatra tokoa. ary
Izany hormone mitombo izany dia mety hanimba ny vatana mihitsy aza.
Ao amin'ny fanamarihana vitsivitsy, ny HGH dia voarakotry ny vokatra hafa, izay tsotra
tsy afaka manevateva. Ohatra, ny fitomboan'ny kibo dia tsy manana siantifika
ny fandraisana ho mpikambana. Azo atao izany raha ny momba ny fampifandraisana ny HGH
Steroïde ary mandany sakafo be dia be
Ary koa, ny hormone mitombo dia tsy misy fiantraikany amin'ny lanjan'ny testosterone, libido
ary ny firaisana ara-nofo, fa tsy toy ny steroids. Feno hormonina ho an'ny lehilahy izany
azo antoka amin'ny lafiny sosialy. Any Thailand dia inoana koa izany
Ny HGH dia miteraka fitsaboana, saingy efa nanohitra izany fianarana izany. Io dia mety ho
dia manjary mampivelatra haingana ny trangan-javatra efa misy (aloha
Ny fanombohan'ny hormone mitrandraka dia ilaina ny mandalo fandrakofana
esory ny fivoaran'ny dingana toy izany).
Ny fampiroboroboana ny fiantraikany lehibe amin'ny fampiasana ny toro-hevitra
Azo atao tsy azo atao ny fatran'ny hormone mitombo. Eny, eny an-dalana
Momba ny voka-dratsiny kely, azontsika lazaina fa mora simba izy ireo,
matetika tsy misy fanafody fanampiny.
Taorian'io amin'ny ankapobeny, azo lazaina fa ny hormone mitombo
dia zava-mahadomelina azo antoka. Araka ny bala avy any Thailand, 88% amin'ireo
Ny HGH dia mihevitra azy io ho zava-mahadomelina mahomby. Ary koa, 86% dia nanamarika tena
Mahita fatim-botra ary mahazo tombony amin'ny halatr'omby. Ny fitomboan'ny
Ny endriky ny herinaratra dia voamariky ny 79%. Amin'izany fotoana izany, mihoatra ny 80% of
Ireo mpangataka dia mora mora foana ny miteraka hormonina mitombo. side
Ny vokatra dia voamariky ny 23% ny atleta manintona loatra
doses amin'ny hormone. Amin'ny ankapobeny, ny sakana lehibe indrindra amin'ny fananana azy ireo
dia tsy ny loza, fa ny vidin'ny hormonina mitombo avo lenta.
Izay rehetra nanapa-kevitra ny hanomboka hormonina mitombo dia tokony handray
Mikarakara ny vola tsy ampy raha ny ampy fotsiny (hay, ny hormone
Zavatra tsy ampy na ampiasaina amin'ny fampiasana tsotsotra amin'ny fampiasana kely dia kely), fa
ary koa mikasika ny vokatra azo avy amin'ny vokatra.